Tani waxay noqon doontaa habka loo qaabeeyo Apple AirTags cusub | Wararka IPhone
Mid ka mid ah waxyaabaha soo kicinaya xanta ugu badan ayaa ah mid dahsoon AirTags, qaar ka mid ah istiikarada naga caawin doonta inaan la socono shay kasta kaas oo aan ku darno istiikarkan xiisaha leh. Yihiin Duula kuwa ugu caansan qaybtaan, laakiin Apple ma rabto in laga tago oo la sii daayo istiikarada raadiyaha u gaarka ah, the AirTags. Ma garanayno goorta la sii dayn doono, laakiin jiritaankoodu waa xaqiiqo taas oo ay ugu mahadnaqayso dhammaan daadadka aan aragnay. Cusub: waxaan horey u ogaanay sida howsha qaabeynta ay noqon doonto. Boodka ka dib waxaan ku siinaynaa dhammaan faahfaahinta ...
Sidii aan aragnay waqtiyo kale, hawsha waxaa lagu fulin doonaa abka cusub ee Raadinta, App-ka bartamaha ka dhigaya juquraafiga aaladahayaga oo dhan iyo asxaabta noo idman inaan ogaano meesha ay ku yaalliin. Taasi waa sababta aan u arki doonno Dadka, Qalabka, Waxyaabaha, iyo aniga tabs. Waxyaabahan aan ku heli karno mahadnaqa AirTags ee aan u kala saari karno iyo xitaa Waxaan ku dul dhejin karnaa xoogaa emoji ah si kala duwanaanshahoodu u fududaado. Qabsashada ku biiraya xaqiijinta diiwaangelinta ee Apple ee magaca AirTags, markaa hadda waa inaan ogaanno oo keliya goorta la bilaabi doono iyo tan ugu muhiimsan: qiimaheeda.
Qaarkood Sawirro ku biiraya kuwii la sii daayay intii lagu jiray sii deynta beta iOS 13. Hadda, waa inaan sii sugnaano wax yar, in ka duwan AirPods Pro cusub ee aan u maleynayo Kuwani AirTags waa la sii dayn doonaa inta lagu guda jiro Muhiimka ah ee soo socda maaddaama ugu dambeyntii ay tahay "qalab" waana hubaal in ragga ka socda Cupertino ay doonayaan inay noo soo bandhigaan. Waxaan dhegta u taagi doonnaa bilaabitaankeeda suurtogalka ah iyo sida muuqata tilmaam kasta oo Muhiim ah oo aan ku arki karno AirTagskan cusub iyo aalad kasta oo cusub oo ka socota Cupertino.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Tani waxay noqon doontaa habka loo qaabeeyo Apple AirTags cusub
Apple TV + hadda waa la heli karaa iyadoo la siinayo hal sano oo lacag la'aan ah